Olee otú iji tọghata M4V ka iTunes
M4V, MPEG-4 faịlụ ndọtị, na-eji maka videos ebudatara ma ọ bụ zụta si Apple iTunes ụlọ ahịa na-agụnye music videos, ihe nkiri, na TV ngosipụta wdg Ọ bụ yiri a MP4 faịlụ, ma ihe dị iche bụ na ọ pụrụ ịbụ otu-echebe faịlụ site na iji Apple si FairPlay DRM nwebisiinka nchebe. Ọ bụ ezie na M4V e mere site Apple Inc, ma ọ bụghị ha nile na-emepụta site Apple. Ọ bụrụ na ị na-eme iji nweta ụfọdụ M4V faịlụ a na-apụghị dị ka iTunes, mgbe ahụ, ọ ga-abụ ya n'ime nyopụta ụzọ ekwekọghị na iTunes.
Ngwa ngwa na-mfe dozie nsogbu, ị nwere ike tọghata ha ka ha iTunes M4V faịlụ na a siri ike ma kensinammuo video Ntụgharị. Ebe a, dị na-agụ site isiokwu na-esi gị kasị mma M4V ka iTunes video Ntụgharị.
Nkebi nke 1: Nweta Best & Professional M4V ka iTunes Ntụgharị
Part 2: Free M4V ka iTunes Ntụgharị
Nkebi nke 3: Online M4V ka iTunes Ntụgharị
Professional video Ntụgharị: Ị nwere ike iji ya iji tọghata ọ bụla video ka iTunes dakọtara formats, MOV, M4V, MP4, H.264 na MPEG-4.
High mmepụta video àgwà: Ọ atọghata gaa nkịtị, 3D na HD videos. Ọzọkwa ngwá ọrụ a na-atọghata videos enweghị adịkwa mbụ video mma.
Kasị ọsọ: O nwere ike ịbụ ihe ndị kasị video Ntụgharị n'etiti ndị niile asọmpi na 30X kasị akakabarede ọsọ.
Ike video nchịkọta akụkọ: Ịnwere ike idezi gị video na elu video edezi atụmatụ, trimming, cropping, na-agbakwunye mmetụta, n'usoro n'usoro, na ndị ọzọ.
Video ka DVD burner: Ị nwere ike dị nnọọ na ngwá ọrụ a na-esure video ka DVD na ọtụtụ menu ndebiri.
1. Tinye M4V faịlụ ka M4V ka iTunes video Ntụgharị
Cheta na: ogbe akakabarede na-akwado, ị nwere ike mbubata ihe karịrị otu faịlụ otu mgbe. Bụrụ na ọ bụghị nri item, dị nnọọ kụrụ bọtịnụ "Hichapụ" ewepụ ya.
2. Mee gị họọrọ mmepụta format
Pịa Format akara imeghe mmepụta format window, wee pịa format ụdị ka ịnweta format ndọpụta ndepụta. Ke "Video" kọlụm, chọta iTunes M4V format ma họrọ ya dị ka mmepụta usoro.
Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ mbubata ha gị iPod, iPad, ma ọ bụ iPhone, ị nwere ike nanị ịhọrọ kachasị presets ha na "Devices" Atiya kama. Ha ga-arụ n'ụzọ zuru okè gị iOS ngwaọrụ.
Atụmatụ: a usoro na-enyekwa edezi ọrụ nke na-enyere ị gbanwee mmepụta video. Common edezi ngwaọrụ na-nyere: akuku, ewepụtụ, mmetụta, watermark, ndepụta okwu (nnọọ pịa Dezie image button n'akụkụ aka nri nke ọ bụla video item).
3. Malite iji tọghata M4V ka iTunes
Mgbe niile dị mkpa mgbanwe dechara, nile nke ahụ na-ekpe-eme ugbu a na-pịa "tọghata" button. Nke a na usoro dị nnọọ oru oma na akakabarede na ọganihu mmanya ga-egosi gị na pasent na fọdụrụ oge.
Mgbe akakabarede dechara, ị nwere ike pịa "Open mmepụta" aka ịchọta gị lekwasịrị faịlụ na ịdọrọ ha ka ha iTunes maka ire ụtọ playback. Ọ gwụla.
Ọ bụrụ na ị chọrọ converted faịlụ a na-atụkwasịkwara iTunes na-akpaghị aka, biko gaa "Finder" ke menu mmanya wee họrọ "Mmasị ...". Ke idaha window, pịa "tọghata" menu, na lelee "Tinye faịlụ ka iTunes Library mgbe akakabarede", mgbe ahụ, pịa OK.
A mmemme cross-n'elu ikpo okwu, ma ọ bụrụ na ị na-eji Windows usoro, ị pụrụ izo aka User Guide na Windows maka nkọwa ndị ọzọ.
E wezụga converting M4V videos, a Video Ntụgharị maka Mac akwado nta niile video / audio format, ị nwekwara ike wepụ ndabere music ma ọ bụ kpochapụwo mkparịta ụka gị video faịlụ, na mbupụ ha dị ka WMA, MP3, M4A, wdg
Video Tutorial: Olee otú Jiri M4V ka iTunes Ntụgharị
# 1. Free M4V ka iTunes Ntụgharị: Wondershare Video Converter Free
Nke a bụ nnọọ pratical na bara uru free M4V ka iTunes video Ntụgharị. Ị nwere ike iji ya onwe tọghata M4V ka iTunes, dezie videos na kpochapụwo video edezi atụmatụ, na ibudata vidiyo si na ọtụtụ video nkekọrịta saịtị.
Pro: nnọọ free M4V ka iTunes video Ntụgharị
1.It-ahapụ gị tọghata M4V niile nkịtị videos, ma ị nwere ike iji ya iji tọghata 3D na HD videos.
2.The mbụ video àgwà nwere ike ida.
3.You na-agaghị ekwe na-eji DVD ọkụ ọrụ.
Olee otú mbubata Movie ka iTunes
Olee otú Mas Download YouTube Videos
Olee otú iji tọghata AVCHD ka MKV na Mac / Windows
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata M4V ka iTunes